कथा : दलबदलू नेता – नेपाली संगसार
नेपाली संगसार calendar_today ९ जेष्ठ २०७८, 9:15 am
एकदिन तिनीसँग भेट भयो। दल परिवर्तन गरिरहनुको कारण सोधेँ। उनले ‘यसबारेमा बेग्लै कुरो छ, मेरो डायरीमा छ, किताब निकाल्दै छु, त्यसपछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’ भने।
‘हेर्नुस् साथी! कलेजमा अध्ययन गर्दा जानी नजानी विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएँ। त्यसपछि नेताहरूसँग सङ्‌गत गर्ने मौकाले डुलिखाने पेसा नै राजनीतिलाई बनाएँ।
‘यो के गर्नु भएको?’ भनी सोध्ने गर्थेँ।
‘कहाँ अब चाणक्य नीतितिर शब्दकोषको राजनीतिको परिभाषा लिएर अघि बढ्न सकिन्छ? सिद्धान्तमा अडिन र साथै लागू गर्न नसकिने रहेछ,’ भन्न थाले।
उनको कुरा बुझेँ, अनि यिनले अब लत्तो छोडेछन् भनी अर्को दलमा प्रवेश गरेँ। त्यहाँ पनि उस्तै हविगत देखेँ।’
‘बुझ्नु भो! नेताहरूको बुद्धि, ज्ञान अनि जनताप्रति उनीहरूको लगाव अध्ययन गरी बुझ्नका निम्ति मैले दल परिवर्तन गरिरहने निधो गरेँ।’
म छक्क पर्थेँ। एक दिन एक नेतालाई ‘तपाईंहरूको भनाइ र गराइमा किन अन्तर?’ भनी सोधेँ।
अनि ती नेता जुरुक्क उठेर चाणक्य नीति र शब्दकोष लिएर आए। अनि भन्न थाले, ‘सिद्धान्तको फाइल दराजमा थन्क्याइसकेको छु, त्यो निकाल्दिनँ, बुझ्नुभयो।’
उनले चाणक्य नीतिको राजनीतिबारे लेखेको कुरा र शब्दकोषको राजनीतिबारे दिएको परिभाषा देखाउँदै ‘लु पढ्नु’ भनी मलाई किताब हुत्याइदिए । मैले फरर पढेँ, अनि व्याख्या पनि गरिदिएँ ।
ती नेताले झर्किएजस्तो गरी भने’ ‘यो मैले केही बुझिनँ, बुझेर काम गर्न थाल्यो भने कार्यकर्ताले कहाँ टेर्छन् र!’
‘यहाँ हर्नुहोस्!’ राजनीतिको परिभाषा एक भिडियो देखाउँदै भने।
‘अब चाणक्य नीति र शब्दकोषको राजनीतिको परिभाषा, अनि सिद्धान्तको के काम छ? न कार्यकर्तालाई भक्त बनाउन सकिन्छ, न जनतालाई मूर्ख, बुझ्नु भो!’ भनी नेता कड्किए।
म चुप भएर केही नबोली त्यहाँ बाट बाहिर निस्किएँ।’
दीपक जी.एमकाे कथाः छोरी
दिर्गराज प्रियसीको कथा “कालो चिया”